Bilcaantii reer Sudan ee ka baxday diinta Islaamka oo lagu soo dhaweeyey Mareykanka – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Haweeneydii u dhalatay dalka Sudan ee ka baxday diinta Islaamka, islamarkaana dil toogasho oo markii dambe laga laabtay lagu xukumay ayaa gaartay dalka Mareykanka, halkaasoo ay ku nolaan doonto.
Haweeneydaan oo lagu magacaabo Maryam Ibrahim ayaa laga badbaadiyey in lagu toogto dalka Sudan, kadib markii dalalka reer Galbeedku cadaadis xoog leh saareen xukuumadda dalkaas, taasoo keentay in xabsiga laga sii daayo.
Bilcaantaan lagu magacaabo Maryan, seygeeda Daniel Wan iyo labo caruur ah oo dhashay ayaa waxaa soo dhaweeyey dowladda hoose ee magaalada Philadelphia ee dalka Mareykanka.
Maryan iyo xubnaha qoyskeeda ayaa dabadeed loo qaaday magaalada Manchester ee gobolka New Hampshire ee isla dalka Mareykanka, halkaasoo ay nolosheeda cusub ka bilaabi doonto.
Qoyskaan ayaa muddo 8 maalmood ah ku sugnaa magaalada Rome ee dalka Taliyaaniga, halkaasoo dowladdaasi geysay. Maryan ayaa la sheegay iney Rome kula kulantay baadariga Pope Francis.
Maryan iyo qoyskeeda ayaa magan ahaan u galay safaaradda Mareykanku ku leeyahay caasimadda dalka Sudan ee Al-khartuum kadib markii ay adkaatay iney halkaas ka dhoofaan.
Maryan waxaa iska dhalay aabe Muslim ah iyo hooyo Kiristaan Orthodox ah, waxaana aabaheed ka tegay guriga hooyadeed iyadoo 5 sano jir ah, taasoo keentay in hooyadeed ku barbaariso diinta Kiristaanka, sida ay sheegtay xarrunta Kasniisadda Roman Catholic ay ku leedahay magaalada Al-khartuum.
Sanadkii 2011 ayay Maryan guursatay nin Kiristaan ah oo kazoo jeeda dalka Koonfurta Sudan, hase ahaatee heysta dhalashada Mareykanka, waxaana Sudan lagu soo taagay maxkamada dil ku xukuntay iyadoo lagu eedeeyey ka baxday diinta Islaamka.
Xukunii dilka ahaa ayaa lagu baabi’iyey racfaan 23 June 2014 kadib markii dalalka reer Galbeedku cadaadis weyn saareen dowladda Sudan.